Ogaden News Agency (ONA) – Kooxdii Cakaaro ee Dubai oo ku kala jabay C/fataax oo dhuumasho ugu yimid
Kooxdii Cakaaro ee Dubai oo ku kala jabay C/fataax oo dhuumasho ugu yimid
Posted by ONA Admin	/ December 9, 2011
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Dubai ee dalka Isu-taga Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa sheegaya in C/fataax Sheekh C/laahi oo ah wasiirka gumaysiga Itobiya uu ku magacaabay arimaha shaqaalaha inuu ku dhuumaalaysanayo magaalada Dubai.
C/fitaax ayaa ugu macneeyay safarkiisa dad uu ku xanqarsaday inuu yahay mid khaas ah, iyadoo loo malaynayo inuu soo dhoofiyey xoogaaga shilaamaadka ah ee dhuuni raacnimada ay kaga urursadaan u adeega gumaysiga iyadoo baryahan danbe ay bilaabeen shaqaalaha gumaysiga oo qawmiyad walba leh inay ku qarsadaan Dubai lacagaha ay soo boobaan.
Wararka ayaa intaa waxay ku dareen in safarka C/fitaax ay keentey in kooxdii Cakaaro ee Dubai ay ku kala qaybsameen iyadoo la sheegayo inuu Cabdi Iley amar ku siiyey kooxdiisii in aysan qaabilin maadaama uu xisbigii ka saarey, wuxuuna kula dardaarmay inay la socdaan dhaq-dhaqaaqiisa iyo meelaha uu maro. Arintaa ayaa markuu ogaaday C/fataax ku noqotay niyad jab waxaana laga sheegay inuu yidhi; “ .. ma Cabdi iley ayaan aduunka uga tagnaa!!”.
Khilaafka ka dhaxeeya Cabdi ileey iyo C/fitaax ayaa ka mid ah sababaha ugu weyn khilaafaadka ka dhex aloosan kooxda ilma Cakaaro.
Dhinaca kale Cabdi ileey ayaa horey u soo direy ninka lagu magacaabo Bashiir Waal oo ah ninka dhinaca maalgashiga u qaabilsan oo ay qaraabo dhaw yihiin, waxaana laga soo xigtey inuu ku hanjabay cidii soo dhawaysa C/fitaax in talaabo laga qaadi doono taas oo loo fasirtey inay tahay hanjabaadaa ku socoto laba nin oo eega C/fitaax ku soo dhaweeyey Dubai. Waxaa kaloo la soo wariyay C/rashiid jire iyo Bashiir oo ah labada nin ee C/fitaax ku soo dhaweeyay halkan inay ooga dhex tolantahay arima aan la ogayn oo quseeya hawsha soo dhawaynta, iyagoo dhinaca kalana ay ka muuqato wal walka ay ka qabaan Bashiir Waal hanjabaadiisa.
Dhamaadka hawshan iyo xisaabaadka laga furanayo Dubai ayaan warbixin dhamaystiran ka soo qori doonaa markaan soo ururino warbixinada filiqsan.